Umkhono we cindezela kufanelekile
Roll emikhonweni ukuthola
Thrust Washer and slide inhlangano
AUTO nginyathela DIE plate
Izithuthi spare IZINGXENYE
DIE Ukulingisa DIE
DIE Ukulingisa DIE & IZINGXENYE
FOR flange Izithuthi
FOR GAS Izithuthi
FOR Electric Power ITHULUZI
FOR apharathasi MEDICAL
FOR OTHER IMIKHAKHA
UMHLAHLANDLELA BUSHING & plate
PET PREFORM ISIKHUNTA SASIKHONA plate
Plastic ISIKHUNTA SASIKHONA BUSHING
PTFE Itshekisela PAD Fakani UKUHLOMA
SINTERED NGAMAFUTHA BUSHING
SYNCHRONIZER Ring UMHLANGANO
Ukudluliselwa GEAR IZINGXENYE
Zhejiang Feiyu Automation Technology Co., Ltd.was eyasungulwa ngo-2004, lisekelwe ucwaningo nentuthuko, ukwakhiwa nokudayiswa ngokuhambisa imikhiqizo eziveza amabhizinisi esekelwe. ubuchwepheshe R & D izisebenzi ezingaphezu kuka-20 ekhona, imikhiqizo esetshenziswa embonini yezimoto, ukwakhiwa imishini, umkhakha Metallurgical, amanzi Conservancy futhi Hydropower, imishini yokukhiqiza ezingaphezu kwezingu-30 insika izimboni, uku yasekhaya eziveza umkhakha ukujabulele idumela ezithile umenzi.
Zhejiang estar isiqoqi sama-softwe Co., ltd. Ngokukhethekile ukukhiqizwa kwezincwadi zokuzithuthukisa kungenisa lubricating bushing, afe ekubunjweni lidayizi afe izingxenye ekubunjweni, uwoyela Bushing sintered, syn icici PTFE tilting pad Thrust esindayo.
The Inkampani kwekuhlela kabusha ngesibindi amabhizinisi ekhona phambili. Ngesisekelo beqinisa ukuqeqeshwa wamathalenta yokuqala, iNkampani kabanzi ukubuthela le izigwili kwezenhlalo, nokobana yesimanje ukuphathwa indlela futhi entsha isu marketing ngokugcwele, futhi uyoyinikela ngokwayo ekuthuthukiseni kwesikhathi eside i-self-lubricating eziveza umkhakha. Inkampani izama ukuphatha futhi ephelele uhlelo. Nge komsebenzi eziphambili, inkampani isungule ephelele (ISO9001 ISO / TS16949) ukuphathwa izinga uhlelo esekelwe inqubomgomo izinga "Quality Okokuqala, Credit Okokuqala Nokwanda Esimeme", futhi izinga layo kanye nokusebenza Usufike kwezilwandle Imikhiqizo efanayo futhi eziphambili ezingeni. Njengoba omunye owaziwa amabombo umkhakha wamabhizinisi e Jiangsu, Zhejiang, Jiashan Feiyu has a isakhiwo zezimboni ezinengqondo futhi ngokuqhubekayo ngcono umthamo yokukhiqiza kanye nokukhiqiza ezingeni. Kusukela kwamiswa inkampani, ke isungule isu lokuthuthukiswa project-kwaholela ngokuqhubekayo ukusungula imikhiqizo ukuthuthukisa ukuncintisana amabhizinisi, ngaphezu lokuphuza ukukhiqizwa, kabusha lokuchubekako lokutimele ekuthuthukiseni iinkambiso zemikhiqizo emitjha.
Ukuze uhlole emakethe, esekelwe emhlabeni bayaqhubeka behlangana amakhasimende ngokuya ahlukahlukene, izidingo zeqophelo eliphezulu, futhi ngenkuthalo ukwandisa izimakethe angaphandle kanye ezimakethe zomhlaba jikelele. Imikhiqizo lithunyelwa eNtshonalanga Yurophu, eMelika naseNingizimu-mpumalanga Asia emazweni angaphezu kuka-20 kanye nezifunda. Inkampani kuzokwandisa ukunweba ovundlile umkhakha umbimbi, dala ezomnotho, ngokugcwele ekuvuleni amasimu amasha, chofoza izinzuzo entsha umkhakha futhi uqaphele ukuthuthukiswa siqu ngetinjongo tayo tekusebenta, bese wakha ikusasa brilliant nabangani abavela kuzo zonke izizinda zokuphila.
Ikheli: Zhejiang Jiashan Weitang Industrial Park Changsheng Road phezu 9th
Ucingo: 0086 573 8471 6635
amabombo esishelelayo ngokuvamile ukuzilimaza lubrica ...
Uwoyela-khulula eziveza izici
amabombo esishelelayo kufanele sinake ...
Sikhungo International Ukuze Ukwakhiwa ...